Isbeddelka ganacsiga wuxuu wadaa isbeddel ku yimaad xiriirka ka dhexeeya IT iyo ganacsiga. Waxyaabaha gudaha iyo dibedda xoogga leh waxay ku xiran yihiin ururrada inay aqbalaan baahida macmiilka iyo in ay fuliyaan waxqabadyo shaqaynaya iyo kuwo cusub. Khabiirada IT-da guud ahaan waxay u baahanyihiin in ay xoogga saaraan injineernimada cusub. Hadda, maareynta guud ee guud waa in la tixgeliyaa iyada oo ah ujeedo gaar ah oo looga hortagayo qalabka casriga ah iyo farsamada ganacsiga. Waxaad ka fekeraysaa waxa uu yahay Togaf si joogto ah.
Waa maxay TOGAF®?
Qaabdhismeedka Dhismaha Aqalka Guud ee Kooxda, TOGAF, waa heer dhexdhexaad ah oo la fahmi karo oo abuuraya naqshad wax ku ool ah. Nadaamka dhamaystiran wuxuu ku darayaa istiraatiijiyadaha iyo qaabeynta qalabka wax lagu taageerayo si loo abuuro ururo awood u leh inay ku dammaanad qaadaan hal qayb kasta oo qaab dhismeed ah ayaa lagu hagaajiyaa furaha ganacsiga.
Dammiin in qof walbaa la hadlayo lahjad la mid ah.
Haysashada fogaansho istiraatiiji ah oo ka timaadda nidaamka xaddidan ee lagu maamulayo farsamooyinka furan ee naqshadeynta ganacsiga weyn.
Waqtiga firaaqada ah iyo lacag caddaan ah, oo isticmaal hantida dhammaanba si ku filan.
Ku guuleystaan ​​heerka caddaynta faa'idada (ROI).
Nidaamka TOGAF wuxuu u fiican yahay inuu raaco shanta qaybood ee la socda, sida lagu yaqaan "Group Open":
Mabaadi'da Qorshaha, Aragga iyo Shuruudaha: Daaqadani waxay ku muujineysaa xilliga ugu hooseeya ee wareegga horumarinta injineernimada. Waxay ku daraysaa xogta ku saabsan sifeynta shahaadada, kala-jajabinta shuraakayaasha, samaynta aragtida naqshadeynta, iyo helitaanka qadarin.
Dhismaha Ganacsiga: Qeexaa horumarinta naqshad ganacsi si loo xoojiyo aragtida injineernimo ee is haysta.
Nidaamka Macluumaadka: Lakankani wuxuu muujinayaa horumarinta qaababka qaab-dhismeedka xog-rogidda qaab-dhismeedeed oo ay ku jiraan horumarinta macluumaadka iyo qaab-dhismeedka codsiga.
Dhismaha Cusub: Lakabkaani wuxuu muujinayaa horumarinta injineernimada cusub ee naqshadaynta.
Engineering xaqiijinta: Lakabkani waa qirashada qaybaha kala duwan ee muhiim u ah darawalnimada ganacsiga.
Khabiir ahaan, khabiirada IT-da waxa ay kudhawaaqeen dhowaan lakabka dhismaha teknoolajiyada, iyo horumarin gaar ah iyo habayn cusub. Isku-dhafid la'aanta lakabka laf dhabarta ah waxay u dhigantaa in ay ka shaqeyneyso bakhaar-ka dhigaysa wax adag oo lagu fulinayo aragtida guud ee ganacsiga. Tixgelinta waa in loo qoondeeyaa dhamaan lakabyada si loo damaanad qaado si sharciya oo leh heerarka ganacsiga, aragtida, waxyaabaha loo baahan yahay iyo naqshadeynta.
Ururada si tartiib tartiib ah waxay u baahan yihiin khabiiro IT si ay u qabsadaan faham dhammaystiran ee ganacsiga si ay u damaanad-qaadaan in cusboonaysiinta qorshaynta baahiyaha ganacsiga, aragtida iyo farsamada. Focusing techniques farsamooyinka TOGAF wuxuu dhiirigelinayaa fahamka ganacsiga iyo fulinta IT-ga wuxuu ka yimaadaa sidii ay u caawin lahayd ganacsiyada.
Tababarka Wadada : TOGAF Qaabdhismeedka Dhismaha Guud ee Furan, wuxuu qeexayaa habka faahfaahsan iyo taageerada khayraadka ee horumarinta dhismaha shirkadda. TOGAF 9 waa qaybta ugu dambeysa ee qaabka furan ee Kooxda. Waxaa la sheegi karaa in TOGAF 9 uu yahay heer caalami ah oo loogu talagalay mashaariicda ganacsiga.